UluLawula njani uLwazi lweAkhawunti yakho? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 327
I-Twitter iye yaba yinethiwekhi yoluntu ngalo mzuzu, apho izigidi zabasebenzisi kunye neeTweets zisebenza yonke imihla. Kwaye ukuhamba kweempapasho kuhlala kungaphazanyiswa. Ukusuka kwiiTweets ezenziwe ngabantu abadumileyo, ukuya kwezo zipapashwe ziinethiwekhi zeendaba, ukubaluleka kwale nethiwekhi kungaphaya.
Njengokuba ungathumela amakhulukhulu eeTweets, konke onokukufumana kwiqonga kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi. Enye yazo yindawo yeakhawunti yakho. Ngokwazisa i-Twitter apho ukhoyo, kuya kukunceda, ikubonise ezo Tweets zihambelana kakhulu nale ndawo.
Nangona kunjalo, I-Twitter ikubonelela ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukulawula zonke iintlobo zolwazi malunga neakhawunti yakho, kwaye ulwazi lwendawo alukho ngaphandle.
Uyilawula njani indawo okuyo?
Nangona idatha yendawo ibonelelwa ngokuzenzekelayo ngexesha lobhaliso, ungayenza le ndawo ukuba ikulungele, ukuba unqwenela, wenze utshintsho kwiprofayili yakho.
Ngena kwi-Twitter, ngenkqubo oyenzayo ngesiqhelo.
Kuya kufuneka ubeke icandelo "Useto nemfihlo" ngaphakathi kwemenyu yeakhawunti. Kwi-App, kuya kufuneka ungene kwifoto yeprofayile, ngelixa kwi-PC, cofa nje ku "Olunye ukhetho".
Emva koko, ngenisa Ubumfihlo & Nokhuseleko ", apho kufuneka uphinde ufumane indawo "ekwabelwana ngayo ngedatha kunye nomsebenzi ngaphandle kwe-Twitter." Ngaphakathi kuyo, ngenisa "Ulwazi lwendawo."
Apha unokufumana kwakhona, Amacandelo ama-4:
"Yenza ngokusesikweni ngokweendawo owawukuzo": Ngokusebenzisa eli candelo, iTwitter ikwazisa ukuba ulwazi apho ubhalisa khona kunye nendawo okuyo ngoku lusetyenziselwa ukukubonisa olona lwazi lubalulekileyo, ke iya kukuvumela ukuba ubonise amava akho e-Twitter.
"Jonga iindawo okhe waya kuzo": Ukungena kweli candelo, kufuneka uqale ufake iphasiwedi yeakhawunti yakho. Xa ufikelela, uya kufumana uluhlu lweendawo apho uqhagamshele khona kwiakhawunti yakho. Ukuya ezantsi uya kufumana ukhetho "Susa" iphawulwe ngombala obomvu, ukuqhubeka nokuzicima ukuba uyafuna.
"Yongeza ulwazi lwendawo kwiiTweets zakho": Ukwenza olu khetho kuvumele i-Twitter ukuba yazi indawo ekuyo kwiiTweets zakho. Uya kufumana kwakhona ukhetho "Cima lonke ulwazi lwendawo olufakwe kwiiTweets zakho."
"Khangela iiSeto": ngaphakathi kwayo ungangqina ukuba uyafuna ukubonisa "Umxholo wale ndawo", ukuze wazi ukuba kwenzeka ntoni kwindawo okuyo ngalo lonke ixesha.
Unokwenza ngokusesikweni iindlela ezibonisiweyo kwiakhawunti yakho ngokusekwe kwindawo okuyo kunye neeakhawunti landela.
Okongeziweyo kuthetha ukutshintsha indawo
Icebo elinomdla lokutshintsha olu lwazi ngezicelo eziguqula i-GPS yeselfowuni yakho. Ezi zinokufumaneka kwivenkile yeeapps kwaye wakube efakiwe, uya kuba nakho ukukhetha indawo ekuyo iakhawunti yakho, eya kuthi iguqule uqikelelo lweentsingiselo kunye neeTweets kumgca wexesha lakho.
1 Uyilawula njani indawo okuyo?
2 Inkqubo yile ilandelayo:
3 Okongeziweyo kuthetha ukutshintsha indawo